3,771 / 42,569 Strings (8 %)
Filter ↓ • Sort ↓ • All (42,569) • Untranslated (38,664) • Waiting (77) • Fuzzy (73) • Warnings (29) • Current Filter (3)
It looks like you're using an old version of %s. For the best WordPress experience, please update your browser.	 <a href='%s'>%s</a> ဗားရှင်း အေဟာင်းကို သင်အသံုးြပုေနသည်ဟု ယူဆရသည်။ အေကာင်းဆံုး WordPress အေတွ့အြကံုများရရှိနိုင်ရန် သင့်ဘေရာက်ဇာကို အဆင့်ြမှင့်ပါ။	 Details
<a href='%s'>%s</a> ဗားရှင်း အေဟာင်းကို သင်အသံုးြပုေနသည်ဟု ယူဆရသည်။ အေကာင်းဆံုး WordPress အေတွ့အြကံုများရရှိနိုင်ရန် သင့်ဘေရာက်ဇာကို အဆင့်ြမှင့်ပါ။
2013-12-19 10:37:14 GMT
2014-09-05 05:31:47 GMT